Umnatha odityanisiweyo, umnatha odityanisiweyo wocingo, ucingo olungenaSisimbithi-iYuze
Umnatha wocingo olungenaNsimbi
Isikwere esilukiweyo seMesh yentsimbi engatyiwa
Intsimbi yentsimbi yesiDatshi yomnatha wocingo
Intsimbi yentsimbi eHlanu yokuluka iMesh
Isinyithi esingenaStainless Crimped Weave Mesh
Intsimbi engatyiwa iWelded Wire Mesh
iStainless Steel Wire
Steel Fine Fine ngocingo
ucingo lwentsimbi estainless (Ukulukwa kweMesh)
ucingo lwentsimbi engatyiwa (Flexible Hose Media)
ucingo lwentsimbi estainless(ucingo lwentambo)
Enye ialloyi elukiweyo iMesh
Umnatha wocingo olwenziwe ngesinyithi kunye nomnatha wocingo lwentsimbi
Ubhedu, ubhedu kunye ne-Bronze Wire Mesh
I-Mesh eyongezelelekileyo yokwenziwa kweeMveliso
Intsimbi yokuSlitting Mesh
Idiskhi yesihluzi sentsimbi engatyiwayo
IIMVELISO ZENTENGISO ezishushu
Ucingo lwensimbi engenasici lune-ductility elungileyo, amandla aphezulu kwaye luhlala ixesha elide lusetyenziswa, ukuguquguquka okuphezulu, ukunganyangeki kwe-abrasion kunye nokumelana nomhlwa, idayamitha eyunifomu, umphezulu ogudileyo, umbala oqaqambileyo, njl. Iingcingo zeSimbi eStainless (Ukuluka kweMesh) Iiparamitha: Idayamitha yocingo: φ0.10-φ4.00 mm Ibakala leMathiriyeli: 304, 304L, 316, 316L,201, 202, 301, 302, njl. UmGangatho: ASTM, GB,DIN,JIS Amandla okuqina: 600N/mm2-800N/mm2 Izicelo: I-70% yethu yeYuze Stainless Steel i-hydrogen annealing wire isetyenziswa kakhulu kwimes...
Bona iimveliso ezininzi >
Iimpawu: Ucingo lwentsimbi olungenasici lune-ductility elungileyo, amandla aphezulu kwaye luhlala ixesha elide lusetyenziswa, ukuguquguquka okuphezulu, ukunganyangeki kwe-abrasion kunye nokumelana nomhlwa, idayamitha eyunifomu, umphezulu ogudileyo, umbala oqaqambileyo, njl. I-Stainless steel wire Parameters: I-Wire diameter: φ0.10-φ4.00 mm Ibakala lezinto eziphathekayo: 304, 304L, 316, 316L, 201, 202, 301, 302, njl. Umgangatho: ASTM, GB, DIN, JIS Amandla e-Tensile: 600N /mm2-800N/mm2 Ingcingo yensimbi engenastainless Usetyenziso: IYuze Intsimbi yentsimbi yehidrojeni yokuqhobosha isetyenziswa njenge bhetyebhetye...
Umnatha wocingo lwentsimbi etyiwayo usetyenziswe ngokubanzi kwimichiza, kwipetrochemical kunye nokuhlola i-oyile, ezothutho, kushishino lwenyukliya, amandla, impahla, i-aerospace, i-electronics, iphepha lokutya amayeza kunye namanye amacandelo emizi-mveliso, kwiindawo ezithile okanye isenokungabi yimathiriyeli yentsimbi eyimfuneko. Ukongeza, i-sub-mesh sta-nless steel kunye nokuhlobisa kwaye kulula ukuyicoca kunye neempawu ze-antbacterial, kwicandelo le-con-sumer lisetyenziswe ngokubanzi, njengokwakhiwa kunye nokuhlobisa, i-kitc ...
iStainless Steel Woven Mesh ikakhulu ibandakanya iPlain /Twill Weave Mesh; ukusuka kwi-1mesh ukuya kwi-635mesh; Ilaphu eliBolting "Tensile Bolt"; I-Crimped Mesh kunye ne-Welded Mesh. I-Plain rhoqo / i-Twill Weave Mesh kunye ne-”Tensile Bolt “ Ilaphu lokuBolting liqhelekile kwizicelo zemizi-mveliso. Lonke ulawulo lomgangatho we-Square mesh olusekwe kwi-ASTM E 2016-15 Standard kunye nemathiriyeli ekrwada esekwe kumgangatho we-ASTM A580-14. Imathiriyeli ekrwada iBanga: 304, 304L, 316, 316L, 430, njl njl. Ukusetyenziswa ngokubanzi kwizicelo ezahlukeneyo: · Ubungakanani...
I-Yuze yenza ilaphu locingo lwesiqhelo ukuhlangabezana neemfuno zokucoca zabathengi. Umnatha wokucoca i-Dutch weave ubonelela ngezakhono zokuhluza eziphezulu kuluhlu olubanzi lwezicelo, kubandakanya uxinzelelo, amafutha kunye nezihluzi zolwelo ze-aerospace, i-petrochemical, i-pharmaceutical, imigodi kunye nemizi-mveliso yokucoca amanzi amdaka. Insimbi engenasici iyamelana nobushushu, iasidi, ukubola kunye nokunxiba. Ngenxa yezi mpawu, i-mesh yensimbi engenasici isetyenziswa ngokubanzi kwimigodi, imichiza, ukutya, i-petroleum, amayeza, njl., ...
Stainless Steel Five Heddle Weave Mesh ibonelela ngokuvula uxande. Uyilo olulodwa lwale mesh lunokunceda ukunyuka kwamanzi kunye neempawu zokuhamba. Le mesh inomphezulu ogudileyo kwelinye icala, esetyenziswa kakhulu ekuhluzeni amashishini ekhemikhali yepetroleum, ngendlela yeerebhoni zokucoca kunye nezinto zokucoca. Stainless Steel Five Heddle Weave Mesh Iimpawu 1. Inikezela ngovulo oluxande 2. Ukuphuculwa kwamanzi kunye neempawu zokuhamba 3. Inikezela ngomphezulu ogudileyo wokususwa ngokulula kwesihluzo ca...
I-Stainless Steel Crimped Wire Mesh yenziwe kwizinto ezahlukeneyo ngokusebenzisa umatshini we-crimping mesh, uhlobo lweemveliso zengcingo zendalo yonke ezinokuvulwa kwesikwere okanye uxande. Insimbi engenaStainless Crimped Wire Mesh ikwaziwa ngokuba yintsimbi ephothiweyo, intsimbi engenastainless mesh, intsimbi emnyama enemesh ngokwezixhobo ezahlukeneyo. IYuze ubukhulu becala ibonelela ngeNsimbi engenaStainless Crimped Wire Mesh Material: 302,304,304L,316,316L Iimpawu: Isakhiwo esiqinileyo kunye nesimbo esisisigxina seCrimped: Intsimbi engatyiwayo iCrimped ...
Stainless Steel Welded Wire Mesh uveliswa platoon welding. Intsimbi engatyiwayo eWelded umnatha wocingo udityaniswe ngomgangatho ophezulu wocingo lwentsimbi yekhabhoni ephantsi kwaye emva koko ugqithiselwe kwaye ufakwe iplastiki ngokutyabeka okubandayo, ukucakwa okushushu kunye nokwaleka kwePVC. Intsimbi yentsimbi eWelded wire mesh yenziwe ngentsimbi yentsimbi ekumgangatho ophezulu. Bubungqina be-asidi ngaphezulu, ukumelana ne-alkali, i-welded ngokuqinileyo, intle kwaye isetyenziswa ngokubanzi. IiNkcukacha zoMnatha weNtsimbi eStainless oDidiweyo: Intsimbi yentsimbi eDityanisiweyo yoNxibelelwano lweMici uphawu:
I-YUZE WIRE MESH CO., LTD yingcingo yensimbi engenasici kunye nomenzi we-mesh we-wire e-Anping, e-China ukususela ngo-1986. Ixabiso lethu lemveliso yonyaka lingaphezulu kwe-40 yezigidi ze-USD; I-80% yeemveliso zithunyelwa kumazwe angama-30 nakwimimandla.
Sinemizi-mveliso emi-3 kunye neofisi yesebe enye; enabasebenzi abangaphezu kwama-200 bebonke: Umzi-mveliso omnye weNsimbi yeSisimbi eStainless Steel; Umzi-mveliso omnye wokuzoba ngocingo lwentsimbi; Umzi-mveliso wokuluka omnye weMesh; Enye iofisi yeSebe eShijiazhuang.
I-Yuze iphumelele inkqubo ye-ISO yekhwalithi: I-GB/T19001-2016 / ISO9001:2015 eyona siseko semisebenzi yokuthengwa kwempahla , inkqubo yokuvelisa kunye nokulawula umgangatho.
UYuze unemizi-mveliso emithathu kunye neofisi yesebe enye, enabasebenzi abangaphezu kwama-200 bebonke
Ukusebenza kwefektri yaseYuze kwaqala ngonyaka ka-1986 kwaye ishishini lokuthumela ngaphandle laqala ukusukela ngonyaka ka-2005
I-Yuze ifumana udumo oluphezulu kubathengi baphesheya kunye nabasekhaya, siqinisekisa ukubonelela ngenkonzo engcono kunye neemveliso ezikhuphisanayo kumaqabane ethu eshishini.
IZIGANEKO & IMIBONISO YORHWEBO
Umatshini omtsha we-spooling kwi-intanethi
Kutshanje, iseti entsha yomatshini wokuhlamba ugunyazisa ukufakwa ngokusemthethweni kwimveliso kwinkampani yaseYuze. Lo matshini unokusebenzisa i-PL, PT kunye nohlobo lwe-NP series spools, olutyebisa ngakumbi ukupakishwa kwethu. Okwangoku, sinokubonelela ngokupakishwa kwe-spools ngolu hlobo lulandelayo: Nceda uqhagamshelane nathi ukuba unazo naziphi na iimfuno okanye...
Imekobume yokuGcinwa koMnatha weNsimbi eNgatyiwayo ibalulekile
Umnatha wentsimbi luhlobo locingo lwentsimbi olunganyangekiyo, olungenamhlwa kwaphela, kwaye ukusebenza kwalo kumdaka kumajelo eendaba ekhemikhali akuzinzanga ngakumbi. Ukunganyangeki komhlwa kwentsimbi yentsimbi engenasici kuchatshazelwa zizinto zayo zekhemikhali ezifana nenickel, chromium, amapolisa...
Namkelekile nonke ukuba nindwendwele Yuze
Xa ndijonga ifoto yotyelelo lwabathengi, ndakhumbula abathengi baseKorea nabaseOstreliya bandwendwele ivenkile yethu yokusebenza kwaye baxoxa ngakumbi kwigumbi lethu lentlanganiso. Yayiyinkumbulo entle ukuba bonke abatyeleli kunye nabasebenzi abazalanayo benkampani bathathe inxaxheba kwingxoxo kwaye kuya kuba njalo. umsebenzi omkhulu ukuqonda ...
Yindlela elungileyo yokukhuthaza xa umthengi esibona kweminye imiboniso, ngakumbi umboniso othile wobungcali, apho izalamane zineemveliso kunye neemveliso applications.Sithathe inxaxheba kwimiboniso emi-4 kwiminyaka emi-2 edlulileyo.Isebe lethu lezentengiso linokuqonda okunzulu kakhulu malunga...
Idilesi yoMzimveliso waseYuze:
Umzantsi Zhengrao Road Anping County, Hebei China
Idilesi yeOfisi yeSebe yaseYuze:
intsimbi engatyiwa ngomnatha elukiweyo, 20mesh Steel Stainless Steel Mesh Isihluzi Disc, Izihluzi ze-Stainless Steel Mesh Mesh Disc, ucingo, 316 Icwecwe leSihluzo socingo olungenaNtsimbi lweMesh, 316 intsimbi yentsimbi,